Hlola i-Hiroshima, Japan - World Tourism Portal
Hlola iHiroshima, Japan
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eHiroshima, Japan
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeHiroshima
Bukela ividiyo ngoHiroshima
Hlola iHiroshima, idolobha elinezimboni elinamabhisikidi amaningi kanye nemifula ewela imifula ogwini loLwandle lwaseSeto Inland.
Yize edume emhlabeni jikelele ngesigameko esesabekayo sokuqhekeka kwesibili ngo-Agasti 6, 1945, lapho iba indawo yokuhlaselwa kwamabhomu e-athomu emhlabeni okokuqala, iHiroshima manje isiyidolobha lesimanjemanje elinokudla okuhamba phambili nobusuku obumnandi obuphithizelayo.
Labo abalindele ukushiya iShansansen inqwaba yemfucumfucu emangele bayobamangaza, njengoba uHiroshima enawo wonke amanye amakhaya anobuhlakani obuye acwebezelayo. Intsha ingena futhi iphume esiteshini, lapho iMcDonald's kanye neyakamuva keitai (omakhalekhukhwini) balindile; amadoda amadala aholo agijimayo ehlela i-Aioi-dori emhlanganweni wawo olandelayo, aphonsa iso elibhekise igazi emigoqweni enamanzi eNagarekawa njengoba bedlula. Uma uqala kancane, kungaba nzima ukucabanga ukuthi ngabe kukhona okuvamile okwenzeka lapha.
Namuhla, iHiroshima inabantu abangaphezu kwezigidi ze-1.1. Izimoto ziyimboni enkulu yasendaweni, enekomkhulu lezinkampani iMazda eliseduze. Kuneminyuziyamu emithathu emihle yobuciko enkabeni yedolobha, abanye abalandeli bezemidlalo baseJapan abathanda ngokweqile, nohlobo oluhle lokujabulisa okubabazekayo - okuphawuleka kakhulu igalelo eliphakeme ledolobha ekudlaleni i-bar cuisine, isitayela seHiroshima okonomiyaki.
Yize izivakashi eziningi, ikakhulukazi amaMelika, zingazizwa zikhathazekile ngokuvakashela i-Hiroshima, yidolobha elinobungane, elamukelayo, elinentshisekelo enkulu emasikweni aseNtshonalanga njengakwenye indawo Japan. Abavakashi bayamukelwa, futhi imibukiso ehlobene nebhomu le-athomu ayinandaba necala noma ukumangalelwa. Kepha khumbula ukuthi abaningi hibakusha basahlala edolobheni, futhi iningi lentsha yaseHiroshima inamalungu omndeni abaphila kulesi sibhicongo. Njengoba kunje, umhlali waseHiroshima ojwayelekile akakwazi ukujabulela ukukhuluma ngakho, noma ngabe awudingi amahloni esihlokweni uma omunye wabalingani abanovalo abebesondele e-Peace Park ekukhuphula lokho.
IHiroshima yasungulwa e-1589 kudoti owakhiwe nguMfula i-Ota, ugeleza uphumela olwandle iSeto Inland. Umkhuzi wempi uMori Terumoto wakha isigodlo lapho, kodwa wasilahla ngemuva kweminyaka eyishumi nanye kuTokugawa Ieyasu ngemuva kweMpi yaseSekigahara, eyayiphawula ukuqala komkhonto waseTokugawa. Ukulawulwa kwendawo kwanikezwa iqembu lomndeni wase-Asano we-samurai, owabusa ngaphandle kwesigameko esikhulu amakhulu amabili nesigamu alandelayo. Inzalo yabo yemukela ukwanda okusha kwenkathi yeMeiji, futhi iHiroshima yaba yisihlalo sikahulumeni walesi sifunda, isikhungo esikhulu sezimboni kanye netheku elimatasa.
NgeMpi Yezwe II, iHiroshima yayingenye yamadolobha amakhulu eJapan, futhi yayiyisikhungo sezokuxhumana nemvelo kwezempi. Izisebenzi eziphoqelelwe ezivela eKorea naseChina zathunyelwa ngamashumi ezinkulungwane, futhi izingane zesikole sendawo nazo zachitha ingxenye yezinsuku zazo zisebenza emafektri okwakhiwa kwezindlu. Izakhamizi zedolobha kumele ukuthi zazizizwa zibusisekile ngokuyisimangaliso ngeminyaka yokuqala yempi, njengoba iHiroshima yayishiywe ingakaqhutshwa emikhankasweni yamabhomu aseMelika kakhulu; leyo, noma kunjalo, yayihlose ukuqinisekisa ukulinganiswa okuqonde ngokwengeziwe kwethonya lebhomu le-athomu kumadolobha angenele, ebelincishiselwe phansi eHiroshima, Kokura, Kyoto, INagasaki, neNiigata.
NgoJulayi nango-Agasti, imvula enamandla ingena ekushiseni okunesihluku, kwe-muggy. Izindawo zokuhlala ezinendawo yomoya uma kungaleso sikhathi lapho uhlela ukuvakasha.
Engxenyeni yokugcina kaSeptemba, izinsuku ezifudumele nezijabulisayo zigxunyezwa nezivunguvungu ezinamandla okwanele ukubhidliza izakhiwo nokugcina abahambi bevalelwe emahhotela abo.
Ngo-Okthoba nangoNovemba zilungile, kunemvula encane namazinga okushisa aqabulayo, aqabulayo. Izinyanga zobusika zilungele ukuvakasha - isimo sezulu somile, lina imvula encane kakhulu noma iqhwa, futhi amazinga okushisa awavimbele ukubanda ngokwanele ukukugcina ungaphakathi endlini. Njengakwezinye izindawo ku Japan, noma kunjalo, iminyuziyamu eminingi ivaliwe ukusuka ku-29 Dec kuya ku-1 Jan (noma i-3 Jan).
U-Ephreli noMay nabo baba nesimo sezulu esihle kakhulu. Izimbali ezingama-cherry zivame ukuqhakaza ekuqaleni kuka-Ephreli, futhi amapaki azungeze iHiroshima Castle aphenduka indawo yesixuku hanami amaqembu. Ngoba sakura ngokuba nesizungu kancane, hamba uye e-Ushita-mama, ubheke ukuphuma kwenyakatho kwesiteshi sikaJR Hiroshima.
Ungafika ngendiza nangesitimela
Ungazungeza ngethilamu, ngebhasi le-metro bike
IHiroshima idume ngesitayela sayo okonomiyaki , okusho ukuthi "kupheke njengoba uthanda". Imvamisa (futhi ngandlela-thile ngokulahlekisayo) ibizwa nge- "pizza yaseJapan", ichazwa kangcono njengohlobo lwenyaya yepancake eyenziwe ngeqanda, iklabishi, isoso noodle, nenyama, ukudla kwasolwandle noma ushizi. It eyakhiwe izingqimba on ipuleti esishisayo phambi kwakho futhi slatally ngokukhululekile nge okonomiyaki usoso, ngokungezwa okungakhethwa okufana ne-imayonnaise, i-ginger ethosiwe, kanye nolwandle. Kuzwakala futhi kubukeka sengathi kuyindida, kepha kunambitheka kakhulu futhi kugcwalisa. Ukukunikeza umuzwa wokuziqhenya komphakathi ohilelekile lapha, ihhovisi lemininingwane yabavakashi baseHiroshima linikeza imephu nge-whpping 97 izitolo ezikhonza okonomiyaki ngaphakathi kwemikhawulo yedolobha, futhi imibiko inamakhulu amaningana endaweni leyo. IMicchan idume kakhulu ezindaweni zokudlela zama-Hiroshima- style okonomiyaki ezinomlando omude. Inamagatsha ambalwa phakathi nendawo naseduze komaphakathi neHiroshima.
Isitayela sikaHiroshima futhi Osaka izitayela izinhlobo ezimbili ukuncintisana okonomiyaki, futhi uma ukhulisa isihloko okonomiyaki nomuntu wasendaweni, lungela ukusho okuthandayo phakathi kwalokhu! Ngokuyisisekelo, eHiroshima izithako ziyahlelwa futhi zicindezelwe ndawonye ngenkathi kuphekwa, ngenkathi kungenwa Osaka I-batter ihlanganiswa ndawonye kuqala, futhi izithako azifaki ama-sood noodle. Ngokuya ngenganekwane yendawo, zombili izitsha zivela kumthamo oshibhile obizwa khishwa yōshoku noma "isenti elilodwa lokudla kwaseNtshonalanga", obekubandakanya ukolweni nepancake lamanzi elinikwa nge-scallions nososo. Abantu baseHiroshima bathande bobabili iKansai ne-Hiroshima-style okonomiyaki. Ngakho-ke, iTokunaga yindawo yokudlela edumile kunazo zonke yaseKansai-okonomiyaki eHiroshima.
IHiroshima idume nangama-oysters ayo (atholakala phakathi kuka-Okthoba noMashi) kanye ne-maple-leaf pastry enomfanekiso obizwa ngokuthi i-maple momiji manjū. (Momiji yiqabunga lesihlahla semapule saseJapan). AmaMomiji manjū atholakala ngokugcwaliswa okuhlukahlukene, kufaka phakathi okujwayelekile anko, ubhontshisi obomvu futhi matcha, noma itiye eliluhlaza okotshani; iyatholakala futhi ku-ukhilimu ushizi, ku-custard, ku-apula naku-chocolate flavour. Amabhokisi we momiji manjū zithathwa njengezikhumbuzo ze-Hintoshima, kodwa Miyajima indawo enhle kakhulu ongayithenga entsha.
Uma ucindezelwa isikhathi lapho usuphuma edolobheni, isitezi sesithupha seJR Hiroshima Station sinendawo enhle, eshibhile Ramen shop, an udon isitolo, inhlonipho izakaya, i-conveyor ibhande le-sushi indawo, ne-STEP, enhle okonomiyaki kuhlanganiswe amamenyu esiNgisi. Kukhona izindawo zokudlela zamaJapan nezaseMelika ezihlanganisiwe eduze kwesiteshi, kufaka phakathi i-Starbucks esitezi sesithathu (ukuphuma eseningizimu), ezikaMcDonald zombili izinhlangothi zesiteshi, ne-Ultra eshibhile (¥ 180 ngesitsha ngasinye) iBikkuri Ramen ngaphesheya komfula ukusuka endaweni ukuphuma kweseningizimu.
INagarekawa inenqwaba yamabha aseHiroshima - amahle, amabi, futhi ehostela - kepha kunezindawo eziningi ezinhle, ezitheni zewayini ezithulekile eHakushima-dori, kanye neningi labashicileli bakwamanye amazwe abanobungane elihlanganiswe eduze kwesakhiwo esikhulu sePARCO. I-Yagenbori-dori igcwele imigoqo namakilabhu asatshalaliswa phansi ezakhiweni ezihlukahlukene eziphakeme.
Abantu abathanda ukubamba iqhaza elikhulu akufanele baphuthelwe yithuba lokuhambela izindawo ezivinjelwe eSaijo, ikakhulukazi ngomkhosi waminyaka yonke ngo-Okthoba.
Miyajimakanye nokuntanta kwayo kwesakhiwo torii luhambo olulula losuku olusuka eHiroshima - cishe ihora ngethilamu noma imizuzu engu-25 ngesitimela sendawo ukuya echwebeni laseMiyajima-guchi bese uyandiza ngesikebhe esifushane.
Uhambo olusuka eHiroshima's Ujina Port lungenziwa kwezinye iziqhingi oLwandle lwaseSeto Inland, njenge INinoshimanesitayela sakhona esidala saseJapan i-Aki no Kofuji.
Ukuhamba ibanga elide ukusuka e-Ujina kungakuhambisa eMatsuyama usuku eziteshini ezidumile zaseDogo Onsenhot.
U-Iwakuni, cishe imizuzu eyi-45 ngesitimela, ufaka ibhuloho laseKintai-kyosamurai kanye nokwakhiwa kabusha kwenqaba ebabazekayo.
I-Onomichi, idolobha elisegqumeni lamathempeli kanye nezazi zezindaba zaseJapan, lihamba ngemizuzu eyi-75 ngesitimela.
I-okama ingesinye isikhungo esikhulu sokuhamba esifundeni, cishe imizuzu ye-45 nguShinkansen. Ngaphandle kokuhehayo, i-Okayama inikeza ukufinyelela kuminyuziyamu nasemigqeni ye Kurashiki.
IMatsue, edume ngenqaba yayo ebukekayo nokubukwa kolwandle, iyatholakala nge-¥ 500 ngebhasi ethatha cishe amahora we-3.